Iyo Economics yeKuenda Viral | Martech Zone
Iyo Economics yekuenda Viral
China, June 27, 2013 China, June 27, 2013 Douglas Karr
Ini handisi mutsigiri wemakambani anoisa panjodzi iyo yese pakuyedza kuenda kuhutachiona… vazhinji havagone kutora fomula pasi uye kuisa njodzi zvakanyanya. Izvo hazvireve kuti iwe haugone kukwidziridza pane kukura kwakakura mumavhidhiyo mavhidhiyo, zvakadaro. Imwe HUGE nhamba pane iyi infographic kubva kuMasters muKushambadzira, Iyo Economics yekuenda Viral, inomira… iyo kushambadza.
Kutenga kufunga / chinangwa kunowedzera 14.3% nekutarisa kwechitatu kweshambadziro pane yepamusoro tier vhidhiyo yekutambira saiti.
Chiverengero chakanakisa uye icho chiri kutora mukana wevashambadzi vazhinji. Youtube inopa ina mana akasiyana marudzi e TrueView kushambadzira:
In-kuyerera kushambadzira tamba senge yeterevhizheni -mberi kushambadzira pamberi kana paimwe vhidhiyo kubva kune weYouTube shamwari. Vataridzi vanoona masekondi mashanu evhidhiyo yako uyezve vanogona kuramba vachiona kana kuisvetuka.
In-slate ads ratidza pamberi peYouTube shamwari mavhidhiyo ari maminitsi gumi kana kupfuura. Vataridzi vanosarudza kutarisa imwe yevatatu kushambadzira kana kuona yakajairwa yekutengesa nguva mukati mevhidhiyo yavo panzvimbo.
In-kutsvaga kushambadzira kuoneka kumusoro kana kurudyi kweyakajairwa mhedzisiro pane yekutsvaga mhinduro peji.
In-kuratidza kushambadzira kuoneka pamwe chete nemamwe mavhidhiyo eYouTube, kana pamawebhusaiti ari paGoogle Ratidza Network inoenderana nevateereri vako.
Kupfuura zvese, neYouTube kushambadzira iwe unobhadhara chete kana muoni achisarudza kuona yako vhidhiyo.
Tags: Kushambadzira Vhidhiyoustreamkutapukirwavhidhiyo yehutachiona
Douglas Karr Thursday, June 27, 2013 Thursday, June 27, 2013
Google Consumer Ongororo yeMusika Ongororo uye Kugutsikana kweWebhusaiti
Tsvaga Zvinzvimbo Zvemamiriro Chikamu Chinowirirana 2013